Andriana - Wikipedia
Ny andriana dia sarangan' olona farany ambony tao amin' ny fanjakana maro teto Madagasikara izay nisongadina indrindra tao amin' ny fanjakana merina, izay nipoiran' ireo mpanjaka. Tao amin' ny fanjakana merina, ny saranga lehibe telo hafa manampy azy io dia ny hova ny mainty sy ny mpanompo (na andevo). Amin' izao fotoana izao dia mbola misy ireo olona atao hoe andriana sy taranak' andriana ao Antananarivo sy ny vohitra manodidina.
1 Ny fivoaran' ny hevitry ny teny hoe andriana
1.1 Teny efa nampiasain' ny Vazimba
1.2 Hevitra voalohan' ny teny hoe andriana
1.3 Fivoaran' ny hevi-teny
2 Ireo karazan' andriana taty Imerina
2.1 Sokajin' andriana nataon-dRalambo
2.1.1 Andriana tsy azo asandratra ho mpanjaka
2.1.2 Andriana azo asandratra ho mpanjaka
2.2 Fanovana tamin' Andriamasinavalona
2.2.1 Sokajin' andriana
2.2.2 Sokajin' ny havan' andriana
2.3 Fomba sy toetra ary sata mampiavaka ny andriana
2.3.1 Ny zo sy ny andraikitra ary ny fadin' ny andriana
2.3.2 Ny endrik' andriana
2.3.3 Andriana manambady hova na mpanompo
3 Ny hoavin' ny andriana ?
3.1 Fivahavahan' ny satan' ny andriana momba ny fanambadiana
3.2 Tsy fitondrana anarana misy ny teny hoe andria-
3.3 Fanafoanan' ny mpanjana-tany ny fanjakan' andriana
3.4 Fiverenana amin' ny fanjakan' andriana?
4 Ohabolana momba ny andriana
Ny fivoaran' ny hevitry ny teny hoe andriana[hanova | hanova ny fango]
Teny efa nampiasain' ny Vazimba[hanova | hanova ny fango]
Raha ny arkeolojian' ny teny no jerena, ny teny hoe andriana dia efa nampiasain'ireo Vazimba (mponina taty anivontany talohan' ny nanjakan-dRabiby sy Andriamanelo ny taona) efa hatry ny ela. Porofon' izany, maro ireo ny anaram-bazimba no ahitana ny teny hoe andriana amin'ny anarany toy ny hoe Andriandroka (anaran'ny mpanjaka vazimba teo Ankotrokotroka) sy Andriambodilova (anaran' ny Vazimba nonina teo Analamanga, razamben' ny Antehiroka). Manaraka izany, ny teny hoe andriana dia nampiasain' ny foko maro eran' i Madagasikara ary efa aman-jato taona tokoa. Midika izany fa tsy foko tokana na vitsy no nivoy ny foto-mpandaminana "andriana".
Hevitra voalohan' ny teny hoe andriana[hanova | hanova ny fango]
Ny teny hoe andriana dia manana heviny roa: ny voalohany dia hoe "andry", izay manana ny lanjany tokoa teo amin'ny Ntaolo, satria ny tranon'izy ireo dia misy andry iray lehibe eo afovoany izay ianteheran' ny trano iray manontolo. Ny andriana ary dia ilazana olona azo ianteheran'ny maro. Amin' ny heviny faharoa, ny hoe andriana dia ilazana koa toerana azo atoriana. Zava-dehibe teo amin' ny Ntaolo tokoa fahizay ny fandriam-pahalemana ka na ny fototeny aza dia andry. Ilazana koa izany fa ny andriana dia olona azo ianteherana amin'ny fandriam-pahalemana. Marihina anefa fa ny teny hoe andriana dia saika fahita amin'ny anaran'ny olona rehetra na fianakavia-mpanjaka, na hova na mpanompo. Izany hoe tsy teny natokana hampiasain'olom-bitsy ny hoe andriana fa azon'ny rehetra ampiasaina tsara.
Fivoaran' ny hevi-teny[hanova | hanova ny fango]
Tany amboalohany, ny teny hoe andriana dia ilazana ireo olona ianteherana, koa ny raim-pianakaviana rehetra na lehiben'ny fianakaviana dia "andriana" avokoa. Io ilay vanim-potoana voatazon'ny fitenenana hoe "samy andrian-ko azy". Tato aoriana anefa, rehefa nihamaro ny olona ka nilaina ny fandaminana ny fiarahamonina dia nifamory ny olona ka nifidy "andriana" iraisana. Io andriana iraisana io dia ny "be taona indrindra" teo amin'ny fiarahamonina noho izy noheverina ho tompon'ny fahendrena. Mbola voatazon' ny angano izany, ka hoy izy manao hoe "vorona nifidy andriana". Rehefa maty ary ny andriana voafidy dia mifidy andriana hafa indray. Dia toy izay hatrany. Mbola maro ireo foko eto Madagasikara mandraka ankehitriny no manaraka io fomba fifidianana io.
Tato aoriana anefa, nihanatahorana sy nohajaina ireny andriana voafidy ireny, ary nisy tamin'izy ireny no namorona fomba fijery milaza fa ny fahefany dia avy amin'ny zanahary ary ny andriana no itoeran'ny hasina ka tsy nanaiky ny andriana fidina ivelan'ny fianakaviany fa tsy maintsy amin'ny taranany ihany no hipoiran'ny "andriana" handimby azy. Nanomboka teo dia tsy nofidiana intsony ny "andriana" fa ifandovana. Nifandraika tamin'izany, dia nisy ireo taranaka mpanjaka indiana, maley sy arabo avy any ampitan-dranomasina tonga teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taonjato faha-9, ka izy ireo koa dia nitonon-tena avy hatrany ho andriana. Teto ary no teraka ny fijery fa ny andriana dia antanantohatra iray eo amin'ny fiarahamonina ary ao aminy no akana ny mpitondra lehibe indrindra, dia ny mpanjaka izany. Io mpanjaka io moa dia antsoin'ny Merina koa hoe: "ny Andriana". Teraka teto koa ny fijery fa rehefa tsy andriana dia voasokajy ho hova na mpanompo (andevo). Io karazan'andriana io no hita farany erak'i Madagasikara tamin'ny taona 1895.
Marihina anefa fa nisy foko sasany izay tsy nahalala akory ny fisian'ny andriana toy ny foko tsimihety izany, mitovy zo avokoa ny mponina ao amin'io foko io ka ny zokiolona no mitondra ny fiarahamonina. Toy izany koa ny foko antambahoaka dia andriana avokoa fa tsy mba nisy hova na mpanompo, saingy mifidy mpanjaka izy ireo. Ho famintinana, dia hoy ny ohabolan'ny Ntaolo merina: "Ny andriana tsy nitrobona avy amin'ny tany, na nitsotsorika avy any an-danitra, fa loharanon'andriana olombelona".
Ireo karazan' andriana taty Imerina[hanova | hanova ny fango]
Ny andriana lazaina eto dia ilay andriana taranaka. Misy antanantohatra koa anefa ao anatin'io andriana io dia ny andriamanjaka, ny zanaka nateraky ny andriamanjaka, ary ireo andriana havan'andriamanjaka.
Sokajin' andriana nataon-dRalambo[hanova | hanova ny fango]
Andriana tsy azo asandratra ho mpanjaka[hanova | hanova ny fango]
Tamin-dRalambo dia namboariny io antanatohatra anatin'ny andriana io mba hisorohana ny ady fanjakana eo amin'ny samy andriana ka nasiany antanatohatra efatra ho an'ireo andriana tsy mahazo manjaka intsony, ka izao ny filaharany araka ny lehibe indrindra mankamin'ny kely indrindra:
Ny Andriantompokoindrindra, ireo taranak' Andriantompokoindrindra, zanaka lahimatoan-dRalambo.
Ny Andrianamboninolona, ireo taranak' Andrianamboninolona, rahalahin-dray no rafozan-dRalambo
Ny Andriandranando, ireo taranak' Andriandranandobe, izay dadatoan-dRalambo.
Ny Zanadralambo izay mizara ho Zanadralambo amin' Andrianjaka (taranaky ny mpanjaka Ralambo tamin' ny vadikeliny) sy Zanadralambo (ireo dia tsy mba taranaky ny mpanjaka Ralambo. Tamin' ny mpanjaka maro, dia nisy ireo olona nisaoran' ny mpanjaka noho ny fahamendrehany koa natao ho isan' ny Zanadralambo izy ireny).
Napetraky ny mpanjaka Ralambo araka ny filahatra etsy ambony ny toerana misy ireo sokajin' andriana ireo ka manomboka eo Ambohidrabiby miantsinana, ny tanàna nametrahany ireo Zanadralambo naterany no akaiky indrindra an' Ambohidrabiby, eo atsinanan'io kosa no misy ny tandavan-tendrombohitra misy ny Andriandranandobe dia i Masinandriana, Ambohimailala, Ambohibe ary i Manankasina. Eo antsinanan' ny Andriandranando kosa ny tandavan-tendrombohitra misy ny Andrianamboninolona, dia Ambohitrandriananahary, ka hatrany Kilonjy, Ambonisoa sy Viliahazo sns. Ary farany any amin'ny antsinana indrindra ny tandavan-tendrombohitra misy an' Ambohimalazabe sy Ambohimalaza. Io fandaminana ny filaharan' ny andriana voarakitra amin' ny fizaran-tany miantsinanana io no mandiso tanteraka ny lovantsofina milaza fa tamin' ny mpanjaka Ralambo dia ny Zanadralambo amin' Andrianjaka no ambony indrindra fa ny mpanjaka Andriamasinavalona no nanova izany.
Andriana azo asandratra ho mpanjaka[hanova | hanova ny fango]
Ny mpanjaka sy ny andriana azo asandratra ho mpanjaka dia tsy mba nampidirin-dRalambo ao anaty fa ivelan' io antanatohatra efatra io. Manaporofo izany, Andriantompokoindrindra sy Andrianjaka ihany no nanaovan-dRalambo fitsapana satria izy roa lahy ireo no hany manana zo hanjaka tamin' ireo zanany naterany maro, ary izy roalahy ihany no zanak' andriana ankoatr' ireo Andriandoriamanjaka. Midika izany fa tsy tamin' Andriamasinavalona akory no nipoitra ny firazanana Zanakandriana hakana ny andriamanjaka fa efa tamin-dRalambo sy talohan' izany saingy no nisy ny Zanakandriana saingy ivelan' ny fanasokajiana izy ireo tamin-dRalambo. Eo amin' ny fizarantany, ny Andriandoriamanjaka sy ny Andrianjaka dia tsy napetra-dRalambo tany amin' ny faritra antsinana na atsimon' Ambohidrabiby.
Manaporofo izany, ireo andriana nahazo nanjaka tamin' ny mpanjaka Ralambo dia ivelan' ny antanatohatra efatra io, ary izy ireo no nahazo niely patrana sy nonina tamin' ny faritra andrefan' Ambohidrabiby. Andrianjaka (sy ny vady aman-janany izay handimby azy) ihany no zanaky ny mpanjaka Ralambo napetrany eny ampita andrefan' Ambohidrabiby, dia teny Ambohimanga izany, fa tato aoriana Andrianjaka rehefa nanjaka vao nianatsimo nankeo Analamanga. Ireo Andriandoriamanjaka izay tsy nanaiky fa hitady fanjakana dia niala teo Ambohidrabiby ka nianavaratra any Andavakisakay sy niakandrefana any Imamo sy Ivonizongo. Ary farany, Andrianentoarivo izay mpanolotsain' Andriantompokoindrindra dia niala avy any Ambohimalazabe ka niankandrefana tonga razan'andriamanjaka any Vonizongo fa tsy nahazo nampiasa trano manara. Ireo ohatra telo ireo dia maneho fa misy ireo karazan'andriana izay tsy voasokajy ao anatin'ny antanantohatra efatra nataon-dRalambo noho izy ireo natao hanjaka ary ny toerana nametrahan-dRalambo azy ireo dia porofo manamarina izany, ny zo hiankandrefana.
Sarotiny tamin'ny fahadiovan' ny andriana ny mpanjaka Ralambo ka tsy nekeny velively ho lasa andriana ny olona na antokon'olona izay zanaka nateraky ny andriana tamin' ny Hova na mpanompo. Ary tsy navelany hanolo-tsaina azy na ny zanany afa-tsy ireo andriana iray karazana aminy. Porofon' izany, ny Andriandoriamanjaka, zafin-dRabiby sy terak'Andrianamboninolona no nalain-dRalambo ho mpanolotsainy teo Ambohidrabiby raha toa ka Andrianentoarivo, izay lasa razan' andriana tany Lohavohitra no mpanolotsain' Andriantompokoindrindra teo Ambohimalaza.
Fanovana tamin' Andriamasinavalona[hanova | hanova ny fango]
Sokajin' andriana[hanova | hanova ny fango]
Tamin' Andriamasinavalona dia notovanany antanatohatra telo teo ambonin' io antanatohatra efatra nataon-dRalambo io, izany dia mba hisorohana hatrany ny ady fanjakana eo amin'ireo taranaka ka toy izao ny filaharany avy amin'ny ambony indrindra hatrany ambany:
Ny Zanakandriana, dia ireo andriana azo asandratra ho mpanjaka (ny Andriantompokoindrindra sy ny taranak' Andrianjaka ary ny Andriandoriamanjaka). Saika zanaka nateraky ny mpanjaka sy ny mpiray tampo amin' ny mpanjaka izy ireo, ary ireo andriana tian' ny mpanjaka hosokajiana ho zanakandriana na noho ny hafa-drazana toy ny momba ny Andriandoriamanjaka. Marihina fa ny Zanakandriana dia mahazo manjaka, saingy maro amin' izy ireny no tsy hasandratra ho mpanjaka mihitsy noho ny antony maro, toy ny lalàna mifehy ny fifandimbiasana teo amin' ny fanjakana na noho ny fifandanjan-kery ka lasa anaram-boninahitra fotsiny sisa ny maha mahazo manjaka azy ireny. Ohatra amin' izany, ny tera-dRadama I sy Rasalimo, na dia Zanakandriana aza dia tsy nahazo nanjaka satria ny lalam-pifandimbiasana teo amin' ny fanjakan'andriana merina dia milaza fa tsy maintsy Merina ray sy reny vao mahazo manjaka. Toy izany koa, Andrianampoinimerina dia nilaza fa tsy maintsy ny tarana-dRangory sy Ralesoka no manjaka, koa ireo zanak' andriana tsy tafiditra amin' izany dia tsy hanjaka mihintsy. Tato aoriana dia nantsoina koa hoe "Printsy" na "Prentsesy" ny Zanakandriana.
ny Zazamarolahy, dia ireo taranak'izy efa-dahy nanjaka teo Antananarivo, Ambohidrabiby, Ambohidratrimo ary Ambohimanga, izy efa-dahy zanaky ny mpanjaka Andriamasinavalona. Tamin' ny andron' Andrianampoinimerina sy ireo mpanjaka nandimby azy dia nampidirina ho isan' ny Zazamarolahy koa ny sasany tamin' ireo andriana tamin'ny foko hafa, toa ny andriana tany Imamo izay nantsoina hoe "Marolahin'Imamo" sy ny zanaky ny mpanjaka sasany tao Andratsay. Ny Zazamarolahy dia sady azo ampiakarina ho Zanakandriana no azo ampidinina koa ho "Andriamasinavalona".
ny Andriamasinavalona: ireo dia anasokajiana ireo taranaky ny mpanjaka Andrianjaka, izay tsy voasokajy ho Zanakandriana na Zazamarolahy, isan' izany ny Zanadranavalona ao Anosimanjaka. Maro koa ny Zanakandriana sy Zazamarolahy no natao ho Andriamasinavalona. Ary misy koa ny "Zanadralambo amin' Andrianjaka" toy ny avy amin'ny terak' Antsomangy no natao ho Andriamasinavalona. Maro koa ny foko hafa no natao ho isan' ny Andriamasinavalona toa ny terak'Andriamborona sy Ampanarifito izay Andrian' Imamo ary ny taranak' izy Antemoro-Anakara telo lahy izay nanolotsaina ny mpanjaka Andrianampoinimerina. Misy amin' ireny tsy taranaky ny mpanjaka Andrianjaka ireny izay nakarina ho Andriamasinavalona anefa no tsy mahazo "trano manara" eo amin' ny fasany.
ary ny Zanadralambo amin' Andrianjaka sy Zanadralambo.
Sokajin' ny havan' andriana[hanova | hanova ny fango]
Fa ankoatr' izany, teo ambanin' ny sokajy Andriana (izay ahitana ireo antanatohatra fito voatanisa etsy ambony), dia nasian' ny mpanjaka Andriamasinavalona koa ny sokajy natao hoe Havan'Andriana ireo havan' andriana moa dia sady tsy andriana no tsy hova. Ny havan' andriana dia ahitana ireo taranaka mpanjaka nanomboka tamin' ny mpanjaka Rafohy sy Rabiby izay tsy mba nampidirina ho andriana. Toy izany ny taranak' Andriamanangaona; ny taranak' Andriamitondra, ny Antehiroka sy maro hafa koa.
Ny Zanakandriana, ny Zazamarolahy ary ny Andriamasinavalona no terak' Ifohiloha. Ny Andriantompokoindrindra, ny Andrianamboninolona ary ny Andriandranandro no atao hoe terak' Andriateloray. Ny Zanadralambo sy ny Zanadralambo amin’Andrianjaka no sokajin’ Andriana nampidirana ireo tarana-dRalambo sy ny havany akaiky.
Hatramin-dRalambo ka hatramin' ny taona 1895, ny andriana dia azo avarina ho hova na mpanompo raha nandika lalàna. Araka izany, tsy mba toy ireny atao amin' ny teny frantsay hoe castes tany India ireny ny fiarahamonina merina. Tany India mantsy ny hova dia tsy mba azo natao andriana ary ny andriana dia tsy mahazo manambady hova. Ohatra amin'izany, Andriamasinavalona dia nanambady zazavavindrano izay niterahany an' i Ranavalontsimitoviaminandriana nonina teo Anosimanjaka. Io renibe Ranavalona io kosa dia voalazan'ny lovantsofina fa nanambady Antehiroka. Toy izany koa i Radama II dia Andriamihaja, hovalahy, no rainy nefa i Ranavalona I no reniny. Ny zanaky ny andriana tamin'ny hova dia sokajiana ho "Folovohitra" , "Hova", na "Velondraimandreny".
Fomba sy toetra ary sata mampiavaka ny andriana[hanova | hanova ny fango]
Ny zo sy ny andraikitra ary ny fadin' ny andriana[hanova | hanova ny fango]
Marihina fa ireo antanantohatr' andriana ireo dia manana ny zony sy andraikiny ary ny fadiny avy. Ohatra, ny Andriandoriamanjaka no mpanenona ny lamban' ny mpanjaka; ny Zazamarolahy sy ny Andriamasinavalona no mpandrary ny tsihy atao amin' ny tranomasina; ny Zanadralambo no mpiandraikitra ny famonosana fatin' andriana; ny Andriantompokoindrindra no manao ny dihy soratra amin' ny fora zanakandriana; ny firavak' andriana, ny terak' i Fohiloha no mahazo trano manara eo ambony fasany, ny mpanjaka no misy ny trano masina eo amin' ny fasany, sns.
Fa misy kosa fombafomba iraisan' ireo antanantohatr'andriana ireo, dia ny fampiasana voambolana manokana hoan' ny andriana toy ny "Tsara va tompoko", na "Sarasara tsy ambaka" na ny "Tsara antitra tompoko" raha mifampiarahaba izy ireo na koa ny "hafenina" na "hasitrika" fa tsy hoe "halevina" raha misy maty ampidirina ao am-pasana; ny tsy fanaovana famadihana fa kosa fandrakofana lamba ny maty, sns.
Ny endrik' andriana[hanova | hanova ny fango]
Vokatry ny lalàna mifehy ny fanambadiana teo amin' ny andriana merina dia nanana endrika mampiavaka azy ny andriana ka izany no antsoin'ny Ntaolo hoe "endrik' andriana" ary manamarina ny fisian'ny endrik' andriana ny ohabolan'ny Ntaolo manao hoe: "Andevo mitafy jaky, arahabaina tsy andriana, tsy arahabaina, andriana". Ny andevo dia saika olo-mainty ka nahagaga ny fiarahamonina ihany no nahita olo-mainty mitafy jaky.
Ireo andriana merina tsy mitampoka mantsy dia saika fotsy fihodirana nefa misy ihany ireo somary mena, na volondavenona na volombarahina. Tena vitsy kosa ireo andriana merina no mainty fihodirana. Maranidranitr' orona sy manifinify molotra ny andriana. Izany maha maranidranitr' orona ny andriana izany dia nataon' ny Ntaolo ho mahatsara tarehy ka raha misy petak' orona dia nataony hoe ratsy tarehy, satria ireo hova sy ireo andevo dia saika petak' orona. Ny andriana merina tsy nifangaro loatra tamin' ny hova na andevo na taranak' andriana amin' ny foko hafa dia kelikely ray ny vatany ary ny andriandahy amin' izany dia somary lavalava endrika. Momba ireo Andriantompokoindrindra izay nalaza tamin' ny lova tsy mifindra ohatra dia efa nilaza tao amin' ny boky Firaketana tamin' ny taona 1939, p. 352 mikasika ny Ambohimalaza: "Zava-dray loha mampiavaka ny Andriantompokoindrindra hatrany am-boalohany izy tsy mety mifanambady amim-poko hafa, nahatonga ny fisiana karazan’ olona manokana, mora fantatra amin’ ny toetr’ endriny – somary vorivory – sy ny volon-kodiny, fotsy (na dia misy ihany koa tsy toy izany amin’ny fianakaviana sasany aminy). Taty aoriandriana vao nisy fivahavahàna kely izany, na noho ny antony momba ny tsi-fahatsaran’ ny fifanambadian’ ny mpihavana akaiky loatra, na vokatry ny fioavan’ny fomban-tany vaovao". Toy izany koa ny Andriamasinavalona tarana-dRanavalotsimitoviaminandriana ao Fiakarana dia mbola sahy milaza fa fotsy fihodirana ny karazan-dry zareo.
Andrianampoinimerina moa dia "ilahifotsy avy amin' ny alahamaditany" no nilazan' Andriambelomasina raibeny azy. Ary ilay vazaha sendra taty antsisin' Imerina tamin' ny nanjakany dia nitatitra fa Andrianampoinimerina dia lehilahy fohy fa tsy lava akory. Manamarina io maha keliray an'Andrianampoinimerina io ny lovantsofina momba ny nampitahana ny tehin' Andrianampoinimerina sy ny an' ny mpanjakan'Imamo sy ny mpanjak' i Betsileo avaratra. Fohy hatrany mantsy ny tehin' Andrianampoinimerina miohatra amin'ny an'ireo mpanjaka roa hafa. Ary ny fandrian' Andrianampoinimerina amin' ny lapany ao Ambohimanga rova aza dia mbola hita ao fa tsy mihoatra ny 1,60 m ny halavan' izany fandriany izany. Toy izany koa Radama I izay mazava fihodirana no maranitr'endrika sy malama volo.
Azo itarafana io endrika maranidranitr' orona amin' ny andriana io ireo sarin' ny tena atin' andriana toa an' Andrianampoinimerina, Radama I, Radama II, Ranavalona I, Ranavamona II, Ranavalona III ary Rasoherina. Misy anefa andriana no mety ho ngita volo mihitsy sy mangamanga saingy maranitr' orona foana izy ireny. Ireny andriana mangamanga sy ngita volo ireny hono no taranaky ny mpanjaka tamin' ny andriana tanindrana na tamin' ny mpanompony ary "ngita volo avo razana no fiantso azy ireny".
Andriana manambady hova na mpanompo[hanova | hanova ny fango]
Nanomboka tamin' ny taona 1895 dia efa maro ireo andriana no nivady tamin' ny hova na mpanompo na foko hafa ka nanova tanteraka ny endrik' andriana ankehitriny. Misy amin' ireo mitonona ho andriana ankehitrio mantsy no zarazara fihodirana sy petak'orona ary ranjanana sy lava ka mifanalavitra tanteraka amin'ny endrik' Andrianampoinimerina sy Leidama sy ry Ranavalona izay averina indray fa fotsy fihodirana, na volombarahina na volondavenona, maranidranitr' orona no manifinify molotra. Mbola maro koa anefa ireo andriana no mitazona izany endrik' andriana izany toy ireo andriana ao Fiakarana izay sahy milaza mihintsy fa fotsy fihodirana.
Ny hoavin' ny andriana ?[hanova | hanova ny fango]
Fivahavahan' ny satan' ny andriana momba ny fanambadiana[hanova | hanova ny fango]
Nanomboka tamin' Andriamasinavalona, nohamafisin' Andrianampoinimerina, dia efa nanomboka nizara ny fanjakana sy ny firazanana tamin' ny hova ny andriana. Ohatra ny toetran-dRanavalona I izay niteraka tamin' ny hovalahy. Radama II kosa no voalohany teraka hovalahy nitondra fanjakana ary Ranavalona II sy Ranavalona III ary Rasoherina dia hovalahy no vadibeny ôfisialy. Izany rehetra izany dia mampiseho ny tsy fanajana ny hafatra napetraky ny razambe mpanjaka tena andriandahy rehetra tany aloha, ka nahavery ny fanjakana.
Tsy fitondrana anarana misy ny teny hoe andria-[hanova | hanova ny fango]
Ireo mpanjaka nandimby an-dRalambo (sarotiny tamin' ny fiandrianana) ka hatreo amin' Andrianampoinimerina dia nitondra hatrany io teny hoe andriana io amin' ny anarany: Andrianjaka, Andriatsitakatrandriana, Andriamasinavalona, Andriambalohery, Andrianjafy, Andrianambonimena sns. Andrianampoinimerina kosa anefa nanova izany tanteraka ka ireo zanany lahy dia tsy mba nisy io teny hoe Andriana io ny anarany: ohatra Rakotondradama, Rakotomavo, Ralainanahary, sns. Na ireo mpanjakalahy nandimby an' Andrianampoinimerina aza dia tsy nahitana intsony io teny hoe Andriana fa dia ny teny hoe Rakoto, Razaka na anarana ialohavan' ny teny hoe Ra- no tena nampiasaina toy ny hoe Rakotondradama, Radamamanjaka, Rakotoseheno, Ranjeva, Ramahatra, Ratefinanahary, Ramaniraka, Rabemaso, sns. Naverina kosa anefa ny fampiasana ny teny hoe manjaka amin' ny anaran' ny mpanjaka toy ny hoe Radamamanjaka sy Ranavalomanjaka raha efa tamin' ny andron-dRalambo sy Rafohy no tena nampiasaina izany hanavahana ny fianakaviana akaikin' ny mpanjaka. Ny fianakaviana akaikin' ireo mpanjaka tamin' ny taonjato faha-19 moa dia nanohy izany fanovana nataon' Andrianampoinimerina izany ka nampiasa ny teny hoe Rakoto na Razafindrakoto na Razafi- na Razana(ka) sns. fa tsy nampiasa intsony ny teny andriana amin'ny anarany, ohatra amin' izany: Rakoto Ratsimamanga (taranaky ny Zanakandriana), Rakoto Andriambalo (lehiben' ny taranaky ny Zazamarolahy), Rakoto Razakaboana (lehiben'ny taranaky ny Andriamasinavalona), Rakotonavalona. Ireo fianakaviana andriana sisa kosa dia mbola tavela amin'ny famelomana ireo anaran-drazany izay mbola nisy ny teny hoe Andriana. Izany fanovana nataon' Andrianampoinimerina izany dia maneho fa mivoatra ny fampiasana ny teny hoe andriana teo amin' ny fiarahamonina sy ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana taty Imerina.
Fanafoanan' ny mpanjana-tany ny fanjakan' andriana[hanova | hanova ny fango]
Tamin' ny taona 1896 dia nofoanan' ny mpanjanatany frantsay ny Fanjakan' i Madagasikara. Izany anefa tsy afaka nanafoana ny fisian' ny ampanjaka sy ny andriana manerana an' i Madagasikara mandraka ankehitriny. Tamin'ny taona 1958 dia napetraky ny mpanajantany frantsay ny rafitra repoblikana manerana an' i Afrika sy Madagasikara. Ny vokatr' izany anefa dia ny fitomboan' ny fahantran' ny vahoaka mandraka ankehitriny. Ny vahoaka eto Madagasikara dia lasa ao anatin' ny firenena efa-polo mahantra indrindra eran-tany (IDH, Indice de développement Humain, PNUD 2010).
Fiverenana amin' ny fanjakan' andriana?[hanova | hanova ny fango]
Rafitra mety hampandroso an' i Madagasikara ary ve ny fiverenana amin' ny fanjakan' andriana?
Ankehitriny dia mbola maro amin' ireny taranak' andriana ireny no mitonona ho tompon' ny fahendrena ary mitaky ny hanomezana ôfisialy toerana ho an'ny andriana eo anivon' ny andrimpanjakana. Misy milaza fa mitombina izany fitakiana izany noho izany toerana izany afaka miantoka ny fitohizan' ny fisian' ny fanjakana raha misy krizy pôlitika goavana eo amin' ny firenena.
Ary araka ny nolazain' Andriantompokoindrindra, efa taloha ela, dia tsy milamina ny tany sy ny fanjakana raha tsy miverina amin' ny tompony ny tany sy ny fanjakana, dia ny andriandahy izany. Ary efa nolazain' ny mpaminany tamin' andron' Andrianampoinimerina koa izany: "Manjaka ny andriandahy, manjaka ny andriambavy; mitondra ny vazaha menasofina; mitondra ny mpanompo; mitondra ny sadasada; izay vao hiverina amin' ny tompony ny fanjakana, dia amin' ny andriandahy izany, izay vao hilamina ny tany sy ny fanjakana. Ary ho avy tsy ho ela intsony izany fotoana izany."
Ohabolana momba ny andriana[hanova | hanova ny fango]
Aleo halan' andriana, toy izay halam-bahoaka.
Andevo tokana amin' andriana: raha tsy matin’ iraka, maty voky.
Andrian-drainazy tsy manam-panjakana; andriana lozabe tsy monina amim-bahoaka.
Aza manao tany lavitra andriana.
Boka nizaha lanonana : tsy isan' ny mpizaha fa isan' ny vahoakan' andriana.
Hianala mahay, ary hiankova mahay ; manao hovalahy mampiady andriana.
Hovalahy mibaby andriana, ka misolo ny entan' ny Manendy.
Merina - Imerina - Fanjakan'i Madagasikara (vaovao)
Andevo (teto Madagasikara)
(en) Rabarioelina, Ndriana (Rev. Dr.) (2010), "Biblical Relations between Israel and Madagascar", Doctoral Thesis of Theology, SAHTS, États-Unis, 2010, 458 pages. Abstract in Saint-Alcuin House Journal, Volume 8, N°1, USA. And in Library of Congress, number ISSN 1548-4459, USA.
(fr) Charlotte Liliane Rabesahala-Randriamananoro, Ambohimanga-Rova : approche anthropologique de la civilisation merina (Madagascar), Paris, Le Publieur, 2006, 393 p. (ISBN 2-85194-307-3. Texte remanié d’une thèse soutenue à l’Université de La Réunion en 2002.
(en) Randrianja Solofo, Ellis Stephen (2009), Madagascar. A short history, London, Hurst & Company, 2009.
Sary[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriana&oldid=1043192"
Voaova farany tamin'ny 22 Janoary 2022 amin'ny 14:15 ity pejy ity.